उच्च शिक्षामा बढ्दै लगानी- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
सुदूरपश्चिमबाट अध्ययनका लागि काठमाडौं वा भारत जाने विद्यार्थीलाई आफ्नै ठाउँमा सहज र सस्तोमा शिक्षा प्रदान गर्नु सञ्चालकहरुको उद्देश्य
धनगढी — ‘शैक्षिक हब’ का रूपमा स्थापना भएको धनगढी पछिल्लो समय निजी क्षेत्रका लागि पनि लगानीको आकर्षक तथा रोजाइको क्षेत्रमध्ये शिक्षा क्षेत्र पनि प्राथमिकता देखिएको छ ।
सुदूरपश्चिममा उच्च शिक्षा आर्जनका लागि ३२ वर्षअघि स्थापित कैलाली बहुमुखी क्याम्पसले ढोका खोलेको हो । पछिल्लो एक दशकयता गाउँगाउँमा ‘प्लस टु’ सञ्चानलमा आए । जिल्ला जिल्लामा धमाधम क्याम्पसहरू खुले ।
यसै क्रममा निजी क्षेत्रले पनि बर्सेनि करोडौं रकम शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ । करिब १८ करोड लगानीमा स्थापित नेपाल वेस्टर्न म्यानेजमेन्ट एन्ड इन्जिनियरिङ कलेज गुरुपूर्णिामाका अवसर पारेर धनगढीमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यसअघि प्लस टुसम्म सञ्चालनमा रहेको उक्त कलेजले पोखरा विश्वविद्यालयसँग आबद्धता लिएर स्नातक तहको बीबीएबीआई र बीएचएम अध्यापन सुरु गरेको छ । कलेज स्थापनाको मुख्य उद्देश्य सुदूरपश्चिमबाट अध्ययनका लागि काठमाडौं वा भारत जाने विद्यार्थीहरूलाई आफ्नै ठाउँमा सहज र सस्तोमा समायानुकूल शिक्षा प्रदान गर्नु रहेको सञ्चालक शैलेश सिंहले बताए ।
धनगढीकै व्यवसायीहरूको सक्रियतामा करिब १२ करोडको लगानीमा स्थापना भएको वाल्मीकि इन्टरनेसनल स्कुल दुई महिनाअघि सञ्चालनमा आएको छ । ४० जनाको साझेदारीमा स्थापना भएको उक्त विद्यालयले पहिलो वर्ष १० कक्षासम्म अध्यापन गराउन थालेको छ ।
विद्यालय सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दिनेशराज भण्डारी भन्छन्, ‘काठमाडौं वा भारतको नैनीताल, देहरादून वा अन्य सहरहरूमा उपलब्ध हुने गुणस्तरीय शिक्षा धनगढीमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विद्यालयको स्थापना गरेका हौं,’ भण्डारीले भने, ‘सुदूरपश्चिमबाट एक वर्षमा कम्तीमा दुई हजार विद्यार्थी भारतको नैनीताल, देहरादूनलगायतका सहरमा माध्यमिक शिक्षाका लागि जाने गरेको आकडा छ ।’
भण्डारीका अनुसार अभिभावकहरूले ती विद्यार्थीलाई बाध्यताले बाहिर पठाउने गरेका हुन् । ‘नाम चलेका ठाउँमा महँगो शुल्क तिरेर पाउने लेभलको शिक्षा यहीं पाइने भए भारत पठाउने कुरै हुँदैन ।’ बाहिर पठाएर लाग्ने खर्चभन्दा न्यून रकममा धनगढीमै अझ उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।
प्लस टु पूरा गरेपछि उच्च शिक्षातर्फ यस क्षेत्रका विद्यार्थीहरूको आकर्षण पनि सबैभन्दा धेरै व्यवस्थापन संकायतर्फ देखिएको छ । ‘व्यवस्थापन संकायतर्फ नै विद्यार्थीहरूको सबैभन्दा धेरै आकर्षण देखिएको छ,’ कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक डा. राजेन्द्रवीर चन्द भन्छन्, ‘ग्रामीण क्षेत्रसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्थापना हुन थालेपछि विद्यार्थीहरूले तत्काल व्यवस्थापन संकायतर्फ नै आफ्नो भविष्य देखेका हुन् ।’
व्यवस्थापन संकायमै पनि विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूले प्रोफेसनल कोर्सहरू सञ्चालनमा ल्याएको डा. चन्दले बताए । बीबीएस, बीबीए, बीबीएबीआई अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या बाक्लो छ । अन्य विषयको अध्ययनभन्दा केही सस्तो पनि हुने भएकाले पनि सजिलो भएको उनको भनाइ छ ।
सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाबाट उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि धनगढी आउने विद्यार्थीहरूको पहिलो रोजाइ व्यवस्थापन संकाय नै हुने गरेको विद्यार्थीहरू बताउँछन् । ‘इन्जिनियरिङ र मेडिसिनमा भर्ना पाउने सम्भावना छैन र आर्थिक स्रोतले पनि पुग्दैन,’ बझाङबाट उच्च शिक्षाका लागि धनगढी आएका प्रेमबहादुर थापाले भने, ‘अलि सस्तो पनि हुने र जागिर पनि पाउन सजिलो होला भने बीबीए पढ्दै छु ।’
होटल म्यानेजमेन्ट संकायतर्फ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको शिक्षाकर्मीहरू बताउँछन् । ‘यहाँको विकासको मेरुदण्ड नै पर्यटन विकास भएकाले ढिलोचाँडो यस क्षेत्रमा पनि ठूला लगानीका होटलहरू सञ्चालन हुने निश्चित छ,’ नेपाल वेस्टर्न म्यानेजमेन्ट एन्ड इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालक शैलेश सिंह भन्छन्, ‘त्यसैले होटल म्यानेजमेन्टको जनशक्ति खेर जाने सम्भावना नदेखिएको हो ।’ तर कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक चन्द भने कुन क्षेत्रमा उत्पादित शैक्षिक जनशक्तिको खपत हुने सम्भावना प्रबल भन्ने भन्ने अध्ययन हुनैपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
पछिल्लो समयमा यहाँका विद्यार्थीमा पनि अध्ययनको रुचि फेरिएको छ । आर्थिक अवस्था र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा कमजोर जगका कारण उच्च शिक्षामा कमैले मात्र रोजेको विषय पढ्न पाएका छन् । तुलनात्मक रूपमा सस्तो मानिएको ब्यवस्थापन संकायभित्र नयाँ कोर्सहरू बीबीए, बीबीएम, बीएचएम, बीआईमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण देखिन्छ ।
त्यसैमा पनि निश्चित कोटा हुने भएकाले इच्छुक जति सबैले भर्ना भने पाएका छैनन् । कृषि, कम्प्युटर साइन्सलगायत प्राविधिक विषयतर्फ पनि विद्यार्थीको अकार्षण उत्तिकै रहेको शिक्षाकर्मीहरू बताउँछन् ।
आर्थिक हिसाबले नधान्ने विद्यार्थीहरूले भने बीबीए, बीबीएबीआई, बीबीएस, रोज्छन् । ४ वर्षे बीबीए वा अन्य प्राविधिक स्नातक तहका लागि ४ लाख हाराहारीमा शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । बीबीएबीआई स्नातक तह पूरा गर्न वेस्टर्नमा ३ लाख ६० हजार रुपैयाँ लाग्ने सञ्चालक सिंहले बताए । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा गइसकेपछि कैलाली बहुमुखीमा बीबीए कोर्स सस्तो भएको सहप्राध्यापक चन्दले बताए । हाल सुदूरपश्चिममा शिक्षा क्याम्पस डडेलधुरा, डोटी क्याम्पस र सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पस महेन्द्रनगर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरू हुन् । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयअन्तर्गत आंगिक हुने क्याम्पसको संख्या पनि वृद्धि भइरहेको छ ।
पछिल्लो समय धनगढी क्षेत्रमा स्नातक तह अध्यापन गराउने सरकारी तथा निजी गरी ८ वटा कलेज सञ्चालनमा छन् । निजी क्षेत्रबाट नास्ट, नेपाल वेस्टर्न एकेडेमी, एसपीए, जयमालिका बहुमुखी क्याम्पस, पश्चिम सेती क्याम्पस गरी ५ वटा छन् । यस्तै, सरकारीबाट कैलाली बहुमुखी क्याम्पस, दुर्गालक्ष्मी क्याम्पस र ऐश्वर्य बहुमुखी क्याम्पसले उच्च शिक्षा अध्यापन गराइरहेको छ ।
सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि कैलाली बहुमुखी क्याम्पसलगायत हरेक जिल्लामा आंगिक क्याम्पस स्थापना भएका छन् । यसले जिल्लामै सर्वसुलभ रूपमा उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न सहज भएको छ । योसँगै गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनको तयारीमा छ । पूर्वाधार तयार भइसकेको गेटा मेडिकल कलेजमा चिकित्साशास्त्रको अध्यापन सुरु भएपछि सुदूरपश्चिमको शिक्षा क्षेत्रले फड्को मार्ने यहाँका शिक्षाकर्मीहरू बताउँछन् ।
प्रकाशित : श्रावण १७, २०७८ १२:०५
शुक्रबार र शनिबारका दिन होटल र कटेजहरूमा बास पाउनै मुस्किल
श्रावण ११, २०७८ अर्जुन शाह
धनगढी — यतिबेला कैलाली, कञ्चनपुरलगायत तराईका बस्तीहरूमा खपिनसक्नु गर्मी छ । तर धनगढीदेखि झन्डै ३० किलोमिटरको दूरीमाथि पहाडमा रहेको खानीडाँडा क्षेत्रमा भने शीतल छ । तराईको गर्मी छलेर खानीडाँडाको शीतलतामा रमाउन धनगढी, महेन्द्रनगर मात्रै हैन, सीमावर्ती भारतका बासिन्दाहरू पनि खानीडाँडा पुग्ने गरेका छन् ।
कैलालीको खानीडाँडा पिकनिक स्थलमा रमाउँदै आन्तरिक पर्यटक । तस्बिर : अर्जुन/कान्तिपुर
पछिल्ला वर्षहरूमा खानीडाँडा खासगरी कैलाली, कञ्चनपुरको तराई क्षेत्रका बासिन्दाका लागि गर्मी छल्ने रोजाइको गन्तव्य बनेको छ । गर्मी सिजन सुरु हुनेबित्तिकै भरिभराउ हुने यहाँका होटल, कटेजहरूमा शुक्र र शनिबारका दिन त बास पाउनै मुस्किल हुने गर्छ । ‘तराईमा गर्मी निकै बढेपछि हप्ताको एक दिन खानीडाँडामा जाने गरेका छौं,’ धनगढीका रमेश भट्टले भने, ‘यतिबेलाको सिजनमा शुक्रबारको दिन त खानीडाँडाका होटलमा बास पाउन पनि मुस्किल पो हुन्छ ।’
खानीडाँडा ओहोरदोहोर गर्ने युवायुवतीहरूको संख्या झन् बाक्लो हुन्छ । दशकअघिसम्म खानीडाँडा कैलाली, कञ्चनपुरलगायत तराईका जिल्लाहरूबाट सुदूरपश्चिमका ७ पहाडी जिल्ला जाने सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रारत यात्रुले खाना नास्ता खाने ठाउँमा सीमित थियो । पछिल्लो समय होटल व्यवसाय र अन्य पूर्वाधार विकासमा लगानी बढेसँगै गर्मी सिजनमा रोजाइको गन्तव्य बनेको हो । हुन पनि एक घण्टा तल तराईमा ३५/३८ डिग्रीको उखरमाउलो गर्मी हुँदा खानीडाँडामा बढीमा २२/२४ डिग्री तापक्रमको चिसोले बहारको अनुभूति गराइरहेको हुन्छ । खानीडाँडामा हाल ७० भन्दा बढी होटल सञ्चालनमा रहेको यस क्षेत्रको चुरे गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष नरबहादुर तामाङले बताए । ‘यहाँ सुविधायुक्त होटलहरू निर्माण भइरहेका छन्,’ तामाङले भने, ‘होटल व्यवसायमा बर्सेनि लगानी बढेको बढ्यै छ ।’
गर्मी छल्नकै लागि खानीडाँडामा पिकनिक मनाउन जानेहरूको संख्या पनि बाक्लै हुन्छ । यहाँ राजमार्ग छेवैमा व्यवस्थित पिकनिकस्थल निर्माण गरिएको छ । धनगढी महेन्द्रनगबाट पिकनिक मनाउन जानेहरू अधिकांश सोही स्थानमा रमाउने गर्छन् । गत साता धनगढीस्थित सुदूरपश्चिमाञ्चाल क्याम्पसको टोली बस रिजर्ब गरेर खानीडाँडामा पिकनिक मनाउन गए । ‘खानपिनका सामग्रीहरू सबै धनगढीबाटै लिएर गएका थियौं,’ क्याम्पसका शिक्षक हरिप्रसाद जोशीले भने, ‘दिनभर खानीडाँडाको शीतलतासँगै रमायौं । त्यो पिकनिकस्थलमा पालै पाउन गाह्रो हुँदो रहेछ ।’ खानीडाँडा नजिकै पर्ने गोदावरी नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने बुढीतोलामा पनि उस्तै घुइँचो हुन्छ ।
स्थानीय उत्पादनका अर्ग्यानिक खाना, लोकल कुखुराको परिकारले खानीडाँडाको आकर्षणलाई झन् धेरै बढाएको होटल व्यवसायीहरू बताउँछन् । ‘हामी ग्राहकहरूलाई सकभर सबै स्थानीय उत्पादनकै खानेकुरा उपलब्ध गराउँछौं,’ होटल व्यवसायी वीरेन्द्र सापकोटाले भने, ‘ठाउँ पनि उत्तिकै रमाइलो छ ।’
खानीडाँडाका चिसो वातावरणमा रमाउन सीमा क्षेत्रमा पर्ने भारतीय सहरबाट स्थानीय आउने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । भारतमा आइतबार साप्ताहिक बिदा हुन्छ । कोरोनाका कारण पहिलाको तुलनामा संख्या घटेको भए पनि फाट्टफुट्ट अहिले पनि आउने गरेको सापकोटा बताउँछन् ।
खानीडाँडाको आकर्षण अझ बढाउन बजारदेखि करिब डेढ घण्टाको दूरीमा रहेको कम्पासेधुरामा भ्यू–टावर निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको वडाध्यक्ष तामाङले बताए । एक हजार ७ सय ८० मिटर उचाइमा रहेको कम्पासेधुराबाट हिमाल, पहाड र तराईको रमाइलो दृश्यावलोकन गर्न मिल्ने रमणीय ठाउँ भएको उनले बताए । ‘कम्पासेधुराबाट कैलालीको चिसापानी पुल अनि कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीको झोलुंगे पुलको मनमोहक दृश्य देखिन्छ,’ वडाध्यक्ष तामाङले भने, ‘सैपालदेखि भारतका सहरहरू पनि कम्पासेधुराबाट देखिन्छन् ।’ बुढीतोलामा रहेको बाख्रा विकास फार्म पनि यस क्षेत्रको अर्को आकर्षण हो । रमणीय ठाउँमा बाख्रा अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा दशकौंअघिदेखि सञ्चालनमा रहेको यो फार्म अवलोकन गर्न किसानहरू मात्रै हैन, अन्य पर्यटकहरू पनि जाने गरेका छन् ।
दुई वर्षअघि खानीडाँडा क्षेत्रमा दुई वटा कालिज फार्म पनि स्थापना गरिएका छन् । ‘कालिज हेर्नका लागि पनि आन्तरिक पर्यटकहरू बुढीतोला र खानीडाँडा आउने गर्छन्,’ बुढीतोलाका होटल व्यवसायी रमेश श्रेष्ठले भने । आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास हुँदै गएपछि खानीडाँडा र बुढीतोला क्षेत्रमा जग्गाको कारोबार बढेको स्थानीयहरू बताउँछन् । ‘गोदावरीमा प्रदेश राजधानी बन्ने भएपछि जग्गा किनबेच अझ बढेको हो,’ वडाध्यक्ष तामाङले भने, ‘अहिले त जग्गा पाउनै मुस्किल छ ।’
प्रकाशित : श्रावण ११, २०७८ १०:२२